Vanasikana Voita Chipfambi kuChipinga Kuti Vararame
Vanasikana vechidiki vanogara muChipinge mudunhu reManicaland vanoti vava kurarama nekutengesa miviri yavo sezvo zvinhu zviri kuvaomera.
Vazhinji vavo vanoti vakatadza kuenderera mberi nedzidzo nepamusana pekushayirwa mari.
Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana, ndakashanyira rimwe bhawa remuChipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde.
Pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru, rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume, uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari.
Wandakatanga kutaura naye ndiMuzvare Respect Gono, uyo akati aive nemakore makumi maviri. Muzvare Gono akati ave nemakore maviri achiita basa rekutengesa muviri wake panzvimbo yekufarira iyi.
Kunyange hazvo Muzvare Gono achiziva kuti basa raari kuita rinoshoresa, anoti akatanga achimboita zvekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiya-siyana kusvika akanda mapfumo pasi sezvo vanhu vazhinji vaive vongochema chema nekushaya mari.
Ndakanzwawo kubva kuna Ashante Muyambo, uyo akati ane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa.
Muyambo akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Achitaura nezvehupenyu hwake, Muyambo anoti akaita pamuviri ari pabasa rake, akabatsirwa nemwana.
Ndakamubvunza kuti seyi asina kuzvidzivirira, akati iye dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo, vanoramba kushandisa makondomu, vomumanikidza sezvo vaine simba rinodarika rake.
Muyambo akatiwo basa rekutengesa miviri iri riri kukanganiswa nekuondomoka kwehupfumi, nokudaro shuviro yake ndeyekuti awane anomubatsirawo nemari yekutanga mabasa emaoko.
Muyambo anoti mari yaanowana iye nevamwe vake, ishoma zvikuru, asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri.
Vasikana ava vanoti vanobhadhrisa munhu madhora matatu kuita zvepabonde kwenguva diki, uye madhora gumi husiku hwese.
Asi vanoti mari iyi inogona kudzikiswa kana zvakaomesesa, varume vachiomera kubhadhara mari idzi.
Ndakataurawo naMandy Skimo, uyo akati aive nemakore makumi matatatu nerimwe. Skimo anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde, iye nevamwe vake vanoenda kuChipinge Hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nana mukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza.
Ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri, ndokutaura nemumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti Shumba.
Murume uyu akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevasikana vanotengesa miviri yavo ava. Shumba, uyo akambofunga kuti ndaive mumwe wevasikana ava, akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau.
Shumba akati vasikana ava vari kurarama hupenyu hunosiririsa. Akakurudzira masangano akazvimirira kuti abatsire vechidiki ava nemari dzekutanga mabasa emaoko, sezvo mari dzavari kuwana dzisina nemusoro wose.
Mumwe wevana mukoti pachipatara cheChipinge asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asina kupihwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti muChipinge zvirwere zvepabonde zvakadzikira kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nechimwe muna2015, kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mashanu nepfumbamwe mugore ra 2016.
Pandakapedza kuunganidza nyaya iyi, ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame, vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana aya.
Vana sorojena varere muhapwa dzegomo vakataura vaona zvechokwadi, paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika vanhu vasinganyare, pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi.